ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းဟာ အလွန်တရာလှပတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် – Gentleman Magazine
ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းဟာ အလွန်တရာလှပတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလှပတဲ့ အရာတစ်ခုက တစ်ချို့တွေအတွက် ဆိုးရွားတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်သွားတတ်ပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို အလေးအနက်မထားသူတွေအတွက်သာ အိမ်ထောင်ရေးက ဆိုးရွားသွားတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင် တစ်သက်တာလုံး ကတိသစ္စာခိုင်မြဲစွာနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားနိုင်ဖို့ ချစ်သူကို မေးထားသင့်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘာကြောင့် ငါ့ ကို ချစ်တာလဲ ?
ဒီမေးခွန်းက မေးစရာမဟုတ်သလို ဖြေဖို့တောင် မလိုဘူးလို့ လူအများစုက ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ချစ်ချင်လို့ ချစ်တာပေါ့လို့ ဖြေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက တကယ်ကို ဆိုးရွားတဲ့အဖြေပါပဲ။ တကယ်တော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ဘာကြောင့် ချစ်ရတာလဲဆိုတာကို လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလူက သင့်အတွက် လုပ်ပေးတာတွေ၊ သင့်ကို ခံစားရစေတာတွေကို သဘောကျလို့ ချစ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နည်းနည်းတော့ ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ပါတနာက ဘာကြောင့် ချစ်မိတာလဲဆိုတာကိုမှ သေချာမသိဘူးဆိုရင် အချစ်တွေရေရည်ခိုင်မြဲနေဖို့ကလည်း မလွယ်ပါဘူး။
၂။ မင်းရဲ့တစ်ဘ၀လုံးကို ဘာကြောင့် ငါနဲ့အတူ ကုန်ဆုံးချင်ရတာလဲ ?
မင်းကို ချစ်လို့ပေါ့ ဆိုတာက အဖြေကောင်းတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀ဆိုတာ ခရီးတစ်ခုနဲ့ တူပါတယ်။ ဒီခရီးတစ်ခုလုံးကို တစ်ယောက်တည်းသွားဖို့ မကောင်းပါဘူး။ လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း တူညီတဲ့ ခရီးပန်းတိုင်တွေ တူညီစွာ ရှိမနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမေးခွန်းကို မေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပါတနာက ဘယ်လို ဘ၀လမ်းခရီးမျိုးကို သင့်နဲ့အတူလျှောက်လှမ်းချင်လို့ သင့်ကိုရွေးချယ်တာလဲဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
၃။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ အမြဲရှင်သန်နေအောင် ထိန်းသိမ်းသွားမှာလား ?
နှစ်ဦးကြား အချစ်တွေ အမြဲရှင်သန်နေဖို့က လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်သလို လုပ်စရာတွေ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းတွေ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ကျေနပ်စရာဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့က တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုခက်ခဲလာတတ်ပါတယ်။ အချစ်တွေက သူ့အတိုင်းတော့ အမြဲရှင်သန်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ယောက်စလုံးက အမြဲမပြတ်ထိန်းသိမ်းထားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၄။ ငါနဲ့ အတူ ရင့်ကျက်လာနိုင်မလား ?
ဘ၀လမ်းခရီးကို လျှောက်လှမ်းရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့မယ်၊ ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲမယ်။ ဘာတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဦးသားအကြား ဝေးကွာသွားစေတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ မဖြစ်အောင် သတိထားထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေက အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုမိုဝေးကွာသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်က အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေမှာရော ဘေးမှာရှိနေပေးနိုင်မလား ?
ပျော်စရာအချိန်တွေကတော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေကတော့ နှစ်ဦးသား ဆက်ဆံရေးကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတစ်ယောက်နဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးစာ လက်တွဲတော့မယ့် ဆိုရင် ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်တွဲမဖြုတ်ပဲ အေးအတူပူအမျှ အတူတကွ ရှိနေနိုင်မလားဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၆။ ဘယ်လောက်ထိ အလျှော့ပေးနိုင်မှာလဲ ?
ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ အဓိကသော့ချက်က သင့်ရဲ့အတ္တကို ချိုးနှိမ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က ဘယ်လောက်ပဲ မှန်နေပါစေ၊ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အလျှော့ပေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သတိထားကြည့်တတ်မယ် ဆိုရင် တစ်ချို့ကိစ္စတွေက အငြင်းပွားစရာမဟုတ်ပဲ အယူအဆသက်သက် အငြင်းပွားနေကြတာကို တွေ့မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လောက်ထိ အလျှော့ပေးနိုင်မှာလဲ ဆိုတာ အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။
၇။ အရာအားလုံးထက် ငါတို့နှစ်ဦးအတွက်ကို ဦးစားပေးနိုင်မလား ?
ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံခံစားစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပြဿနာက ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုခံစားလို့ မရနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးတာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကလည်း သင့်ရဲ့လက်ကျန်ဘ၀အတွက် အခြေခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေဖို့က သင့်ဘ၀မှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သင့်ပါတယ်။
၈။ မိဘကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မလား ?
ယောင်္ကျားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို ဘယ်သူကမှ ကြိုပြောနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စက ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လာတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အများကြီးတွေးနေစရာမလိုပဲ မိဘကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် နေမယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ်။ သင့်ချစ်သူကရော၊ ဒီလိုမျိုး ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်ပါ့မလား။
၉။ မင်း ငါ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာကို အမြဲတမ်း ဖော်ပြနေမှာလား ?
နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးမှာ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်တယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်း သိချင်သလို ကြားလည်း ကြားချင်ကြပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာကလည်း အမြဲတမ်းတည်မြဲနေမယ်လို့ မပြောနိုင်တာကြောင့် ဘယ်လောက်ထိ ချစ်နေသေးလဲဆိုတာကို သိအောင်ဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း တစ်ယောက်က ချစ်တတ်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။
၁၀။ အချစ်မီးလျှံလေး အမြဲတောက်လောင်နေအောင် အားထုတ်နိုင်မလား ?
အချစ်စိတ်တွေက အမြဲတမ်း တက်ကြွလန်းဆန်းနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နှစ်ဦးသား ဆက်ဆံရေးမှာ အချစ်စိတ်တွေ အမြဲတမ်းရှင်သန်နေစေဖို့ အားထုတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၁၁။ လိုအပ်လာတဲ့အခါ အားပေးကူညီမှာလား ?
ငွေရေးကြေးရေး တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ အားပေးကူညီပေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘ၀မှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ပါတနာက အားပေးကူညီပေးမှာလားဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ သင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင် တွဲခေါ်ပေးမှာလား၊ သင်ပြန်လည် ထူထောင်လာသည်အထိ မိသားစုတာဝန်ကို ထိန်းသိမ်းထားပေးနိုင်မလား၊ စသဖြင့် သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၂။ ကိုယ်ပိုင် ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကို ဆက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကတိပေးနိုင်မလား ?
အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ထောင်လိုက်တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ အားလုံးအဆုံးသတ်သွားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ လိုအင်ဆန္ဒတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ အားလုံးက ဆက်လက်ရှင်သန်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကိုယ့်ကို အရင်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်သလို ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ပါတနာအပေါ်မှာ နားလည်စာနာမှုအပြည့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ မင်းကိုယ်မင်း ဂရုစိုက်နိုင်မလား ?
သင့်ပါတနာအနေနဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်တိုင် ဂရုစိုက်နိုင်မလား မေးတာက တစ်မျိုးဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်တဲ့အတွက် ဖြစ်လာတဲ့သက်ရောက်မှုတွေကြောင့် သူနဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိသူတွေ ဘယ်လာက်ထိ ခက်ခဲပင်ပန်းရသလဲဆိုတာကို သိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကျန်းမာရေး ကိုယ်တိုင် ဂရုစိုက်ဖို့က ပဓာနကျပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ သူချစ်တဲ့လူတွေအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၁၄။ ငါ အရင်ဆုံးသွားရမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ မင်း ရှိနေပေးနိုင်မလား ?
လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ဖို့ အားမရှိတော့သည်တိုင်အောင် သင့်လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားပေးမှာလား။ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ အနားမှာရှိနေပြီး ချစ်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပေးနိုင်မလား။ ဘယ်သူကမှ သေကွဲကွဲဖို့အကြောင်းပြောရင် လက်ခံချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၅။ မင်းနားက ငါအရင်ထွက်သွားရရင်ရော၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးစာအတွက် ဆက်ရှင်သန်ပေးနိုင်မလား ?
သင် ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို သူ့အနားမှာ သင်ရှိရှိ၊ မရှိရှိ၊ ပျော်နေစေချင်မှာ သေချာပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ဘ၀သက်တမ်းက တိုတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ သင့်ပါတနာအနေနဲ့ ဘ၀ကို သက်တမ်းစေ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆက်လက်ဖြတ်သန်းသွားမှာလားဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ နှစ်ဦးသား ရည်မှန်းထားတာတွေ၊ ပျော်စရာရှိတာတွေ၊ ကလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသွားဖို့တွေကို ဆက်လုပ်ပေးနိုင်မှာလားဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။
ထိမျးမွားလကျထပျခွငျးဟာ အလှနျတရာလှပတဲ့ အလအေ့ထတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုလှပတဲ့ အရာတဈခုက တဈခြို့တှအေတှကျ ဆိုးရှားတဲ့အရာတဈခု ဖွဈသှားတတျပါသေးတယျ။ တကယျတော့ လကျထပျထိမျးမွားခွငျးကို အလေးအနကျမထားသူတှအေတှကျသာ အိမျထောငျရေးက ဆိုးရှားသှားတတျတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လကျထပျထိမျးမွားပွီး အိမျထောငျတဈခုကို တညျထောငျတော့မယျဆိုရငျ တဈသကျတာလုံး ကတိသစ်စာခိုငျမွဲစှာနဲ့ ခဈြခဈြခငျခငျ ပြျောပြျောရှငျရှငျနသှေားနိုငျဖို့ ခဈြသူကို မေးထားသငျ့တဲ့ မေးခှနျးလေးတှေ စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ ဘာကွောငျ့ ငါ့ ကို ခဈြတာလဲ ?
ဒီမေးခှနျးက မေးစရာမဟုတျသလို ဖွဖေို့တောငျ မလိုဘူးလို့ လူအမြားစုက ထငျတတျကွပါတယျ။ တဈခြို့တှကေ ခဈြခငျြလို့ ခဈြတာပေါ့လို့ ဖွတေတျကွပါတယျ။ ဒါက တကယျကို ဆိုးရှားတဲ့အဖွပေါပဲ။ တကယျတော့ ကိုယျခဈြတဲ့သူတှကေို ဘာကွောငျ့ ခဈြရတာလဲဆိုတာကို လူတိုငျးသိထားသငျ့ပါတယျ။ တဈစုံတဈယောကျကို ခဈြတယျဆိုတာ တကိုယျကောငျးဆနျတဲ့ ကိစ်စတဈခုဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒီလူက သငျ့အတှကျ လုပျပေးတာတှေ၊ သငျ့ကို ခံစားရစတောတှကေို သဘောကလြို့ ခဈြတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ နညျးနညျးတော့ ကှဲလှဲမှုရှိနိုငျပါတယျ။ သငျ့ပါတနာက ဘာကွောငျ့ ခဈြမိတာလဲဆိုတာကိုမှ သခြောမသိဘူးဆိုရငျ အခဈြတှရေရေညျခိုငျမွဲနဖေို့ကလညျး မလှယျပါဘူး။
၂။ မငျးရဲ့တဈဘဝလုံးကို ဘာကွောငျ့ ငါနဲ့အတူ ကုနျဆုံးခငျြရတာလဲ ?
မငျးကို ခဈြလို့ပေါ့ ဆိုတာက အဖွကေောငျးတဈခု မဟုတျပါဘူး။ ဘဝဆိုတာ ခရီးတဈခုနဲ့ တူပါတယျ။ ဒီခရီးတဈခုလုံးကို တဈယောကျတညျးသှားဖို့ မကောငျးပါဘူး။ လူတိုငျးရဲ့ စိတျထဲမှာလညျး တူညီတဲ့ ခရီးပနျးတိုငျတှေ တူညီစှာ ရှိမနနေိုငျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီမေးခှနျးကို မေးကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ပါတနာက ဘယျလို ဘဝလမျးခရီးမြိုးကို သငျ့နဲ့အတူလြှောကျလှမျးခငျြလို့ သငျ့ကိုရှေးခယျြတာလဲဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယျ။
၃။ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှေ အမွဲရှငျသနျနအေောငျ ထိနျးသိမျးသှားမှာလား ?
နှဈဦးကွား အခဈြတှေ အမွဲရှငျသနျနဖေို့က လှယျကူတဲ့ကိစ်စမဟုတျပါဘူး။ စိတျဓာတျပိုငျးနဲ့ သကျဆိုငျသလို လုပျစရာတှေ၊ ဆနျးသဈတီထှငျနိုငျစှမျးတှေ အမြားကွီးလိုအပျပါတယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ အပွနျအလှနျ ကနြေပျစရာဖွဈလာအောငျ လုပျဆောငျဖို့က တဈနှဈထကျတဈနှဈ ပိုခကျခဲလာတတျပါတယျ။ အခဈြတှကေ သူ့အတိုငျးတော့ အမွဲရှငျသနျနမှောမဟုတျပါဘူး။ နှဈယောကျစလုံးက အမွဲမပွတျထိနျးသိမျးထားပေးဖို့ လိုပါတယျ။
၄။ ငါနဲ့ အတူ ရငျ့ကကျြလာနိုငျမလား ?
ဘဝလမျးခရီးကို လြှောကျလှမျးရာမှာ ကြှနျတျောတို့ အားလုံးက ဘယျလိုတှကွေုံတှမေ့ယျ၊ ဘယျလိုတှေ ပွောငျးလဲမယျ။ ဘာတှေ ဖွဈလာမယျဆိုတာကို အတိအကမြသိနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ နှဈဦးသားအကွား ဝေးကှာသှားစတေဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှေ မဖွဈအောငျ သတိထားထိနျးသိမျးတတျဖို့ လိုပါတယျ။ တဈခြို့ လူတှကေ အခြိနျကွာလာတာနဲ့ အမြှ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပိုမိုဝေးကှာသှားတတျကွပါတယျ။ ဒီအခကျြက အိမျထောငျရေးပွိုကှဲရတဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
၅။ ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့အခြိနျတှမှောရော ဘေးမှာရှိနပေေးနိုငျမလား ?
ပြျောစရာအခြိနျတှကေတော့ ပွောစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့အခြိနျတှကေတော့ နှဈဦးသား ဆကျဆံရေးကို ပကျြစီးသှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူတဈယောကျနဲ့ ဘဝတဈခုလုံးစာ လကျတှဲတော့မယျ့ ဆိုရငျ ကောငျးကောငျးဆိုးဆိုး ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာပဲဖွဈဖွဈ လကျတှဲမဖွုတျပဲ အေးအတူပူအမြှ အတူတကှ ရှိနနေိုငျမလားဆိုတာကို သခြောစဉျးစားဆုံးဖွတျဖို့ လိုပါတယျ။
၆။ ဘယျလောကျထိ အလြှော့ပေးနိုငျမှာလဲ ?
ပြျောရှငျသာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးရဲ့ အဓိကသော့ခကျြက သငျ့ရဲ့အတ်တကို ခြိုးနှိမျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျက ဘယျလောကျပဲ မှနျနပေါစေ၊ တဈခြို့နရောတှမှော အလြှော့ပေးတတျဖို့ လိုပါတယျ။ သတိထားကွညျ့တတျမယျ ဆိုရငျ တဈခြို့ကိစ်စတှကေ အငွငျးပှားစရာမဟုတျပဲ အယူအဆသကျသကျ အငွငျးပှားနကွေတာကို တှမှေ့ာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘယျလောကျထိ အလြှော့ပေးနိုငျမှာလဲ ဆိုတာ အရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျ။
၇။ အရာအားလုံးထကျ ငါတို့နှဈဦးအတှကျကို ဦးစားပေးနိုငျမလား ?
ဘဝမှာ တှကွေုံ့ခံစားစရာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ပွဿနာက ကြှနျတျောတို့ အားလုံးကိုခံစားလို့ မရနိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အရေးကွီးတာတှကေိုပဲ ရှေးခယျြတတျဖို့ လိုပါတယျ။ အိမျထောငျရေးဆိုတာကလညျး သငျ့ရဲ့လကျကနျြဘဝအတှကျ အခွခေံတဈခုဖွဈပါတယျ။ နှဈဦးသားဆကျဆံရေးကောငျးမှနျနဖေို့က သငျ့ဘဝမှာ အရေးအကွီးဆုံးဖွဈသငျ့ပါတယျ။
၈။ မိဘကောငျးတဈယောကျဖွဈလာနိုငျမလား ?
ယောင်ျကြားလေးပဲ ဖွဈဖွဈ၊ မိနျးကလေးပဲဖွဈဖွဈ မိဘကောငျးတဈယောကျ ဖွဈနိုငျမဖွဈနိုငျကို ဘယျသူကမှ ကွိုပွောနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီကိစ်စက ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ဆိုငျပါတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြကနေ လုပျဆောငျခကျြဖွဈလာတာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ အမြားကွီးတှေးနစေရာမလိုပဲ မိဘကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျ နမေယျ ဆုံးဖွတျလိုကျတာနဲ့ ဖွဈလာမှာသခြောပါတယျ။ သငျ့ခဈြသူကရော၊ ဒီလိုမြိုး ဆုံးဖွတျထားနိုငျပါ့မလား။
၉။ မငျး ငါ့ကို ဘယျလောကျခဈြလဲဆိုတာကို အမွဲတမျး ဖျောပွနမှောလား ?
နှဈဦးသားဆကျဆံရေးမှာ တဈယောကျက တဈယောကျကို ဘယျလောကျထိ ခဈြတယျဆိုတာကို အမွဲတမျး သိခငျြသလို ကွားလညျး ကွားခငျြကွပါတယျ။ အခဈြဆိုတာကလညျး အမွဲတမျးတညျမွဲနမေယျလို့ မပွောနိုငျတာကွောငျ့ ဘယျလောကျထိ ခဈြနသေေးလဲဆိုတာကို သိအောငျဖျောပွဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တဈယောကျဖွဈစခေငျြတဲ့ပုံစံအတိုငျး တဈယောကျက ခဈြတတျဖို့လညျး လိုပါသေးတယျ။
၁၀။ အခဈြမီးလြှံလေး အမွဲတောကျလောငျနအေောငျ အားထုတျနိုငျမလား ?
အခဈြစိတျတှကေ အမွဲတမျး တကျကွှလနျးဆနျးနမှော မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ နှဈဦးသား ဆကျဆံရေးမှာ အခဈြစိတျတှေ အမွဲတမျးရှငျသနျနစေဖေို့ အားထုတျဖို့ လိုပါတယျ။
၁၁။ လိုအပျလာတဲ့အခါ အားပေးကူညီမှာလား ?
ငှရေေးကွေးရေး တဈခုတညျးမဟုတျပါဘူး။ စိတျဓာတျပိုငျးဆိုငျရာလညျး ပါဝငျပါတယျ။ လိုအပျရငျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာကိုပါ အားပေးကူညီပေးနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ ဘဝမှာ မြှျောလငျ့မထားတဲ့အရာတှေ ဖွဈလာတဲ့အခါမှာ သငျ့ရဲ့ပါတနာက အားပေးကူညီပေးမှာလားဆိုတာ အရေးကွီးပါတယျ။ သငျလမျးမလြှောကျနိုငျရငျ တှဲချေါပေးမှာလား၊ သငျပွနျလညျ ထူထောငျလာသညျအထိ မိသားစုတာဝနျကို ထိနျးသိမျးထားပေးနိုငျမလား၊ စသဖွငျ့ သိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၁၂။ ကိုယျပိုငျ ရညျမှနျးခကျြ အိပျမကျတှကေို ဆကျအကောငျအထညျဖျောဖို့ ကတိပေးနိုငျမလား ?
အိမျထောငျတဈခုကို တညျထောငျလိုကျတာက လူတဈယောကျရဲ့ ဖွဈခငျြတဲ့ အိပျမကျတှေ၊ ရညျမှနျးခကျြတှေ အားလုံးအဆုံးသတျသှားဖို့ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိပျမကျတှေ၊ လိုအငျဆန်ဒတှေ၊ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ၊ ရညျမှနျးခကျြတှေ အားလုံးက ဆကျလကျရှငျသနျနရေမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါတှကေို လကျလှတျဆုံးရှုံးသှားမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ ကိုယျကိုယျ့ကို အရငျဆုံးရှုံးရမှာဖွဈသလို ကိုယျခဈြတဲ့လူတှကေိုလညျး ဆုံးရှုံးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိမျထောငျတဈခုမှာ သငျတဈယောကျတညျး မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ပါတနာအပျေါမှာ နားလညျစာနာမှုအပွညျ့နဲ့ ကိုယျပိုငျရညျမှနျးခကျြ အိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျဖျောနိုငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁၃။ မငျးကိုယျမငျး ဂရုစိုကျနိုငျမလား ?
သငျ့ပါတနာအနနေဲ့ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကို ကိုယျတိုငျ ဂရုစိုကျနိုငျမလား မေးတာက တဈမြိုးဖွဈနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ ကနျြးမာရေးကို ဂရုမစိုကျတဲ့အတှကျ ဖွဈလာတဲ့သကျရောကျမှုတှကွေောငျ့ သူနဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိသူတှေ ဘယျလာကျထိ ခကျခဲပငျပနျးရသလဲဆိုတာကို သိဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျ့ကနျြးမာရေး ကိုယျတိုငျ ဂရုစိုကျဖို့က ပဓာနကပြါတယျ။ လူတဈယောကျဟာ သူခဈြတဲ့လူတှအေတှကျ ဝနျထုပျဝနျပိုး မဖွဈသငျ့ပါဘူး။
၁၄။ ငါ အရငျဆုံးသှားရမယျဆိုရငျ နောကျဆုံးထှကျသကျထိ မငျး ရှိနပေေးနိုငျမလား ?
လကျကိုဆုပျကိုငျဖို့ အားမရှိတော့သညျတိုငျအောငျ သငျ့လကျကို ဆုပျကိုငျထားပေးမှာလား။ နောကျဆုံးထှကျသကျအထိ အနားမှာရှိနပွေီး ခဈြတဲ့အကွောငျးကို ပွောပွပေးနိုငျမလား။ ဘယျသူကမှ သကှေဲကှဲဖို့အကွောငျးပွောရငျ လကျခံခငျြကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရှောငျလှဲလို့မရနိုငျတဲ့ကိစ်စဖွဈတဲ့အတှကျ ပွငျဆငျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၁၅။ မငျးနားက ငါအရငျထှကျသှားရရငျရော၊ ငါတို့နှဈယောကျစလုံးစာအတှကျ ဆကျရှငျသနျပေးနိုငျမလား ?
သငျ ခဈြတဲ့လူတဈယောကျကို သူ့အနားမှာ သငျရှိရှိ၊ မရှိရှိ၊ ပြျောနစေခေငျြမှာ သခြောပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့ဘဝသကျတမျးက တိုတောငျးခဲ့မယျဆိုရငျ သငျခဈြမွတျနိုးရတဲ့ သငျ့ပါတနာအနနေဲ့ ဘဝကို သကျတမျးစေ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဆကျလကျဖွတျသနျးသှားမှာလားဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယျ။ နှဈဦးသား ရညျမှနျးထားတာတှေ၊ ပြျောစရာရှိတာတှေ၊ ကလေးတှရှေိခဲ့မယျဆိုရငျလညျး ပွုစုပြိုးထောငျပေးသှားဖို့တှကေို ဆကျလုပျပေးနိုငျမှာလားဆိုတာက အရေးကွီးပါတယျ။
Previous: အထင်ကရအမျိုးသားတစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ ရှောင်ရန် အချက်(၁၀)
Next: ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက် အလေ့အကျင့်(၅)ခု